प्राकृतिक चिकित्साः रोगमुक्त जीवनको सूत्र
‘रोगमुक्त रहनु नै उपचार गर्नुभन्दा बढी उत्तम हो ।’
कुनै औषधीको प्रयोग नगरी, शल्यक्रिया नगरी, सुई नखोपी गरिने उपचार विधी हो, प्राकृतिक चिकित्सा । यो नै प्रभावकारी र हानिरहित विधी पनि हो ।
रोग लागिसकेपछि मात्र होइन, रोगमुक्त जीवन बाच्नका लागि समेत प्राकृतिक चिकित्सा उपयोगी हुन्छ । प्राकृतिक रुपमै बलियो, निरोगी, तन्दुरस्त हुनु पहिलो सर्त हो । रोग लागिसकेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नदिन नै सर्वोत्तम हो । अतः यसको एउटै सूत्र भनेको प्राकृतिक चिकित्सा नै हो ।
प्राकृतिक चिकित्सा आफैमा एक अनौठो प्रणाली हो जसले शारीरिक, मानसिक, नैतिक र आध्यात्मिक रुपमै मान्छेलाई सही मार्गमा हिँडाउँछ । यसमा स्वास्थ्यलाई प्रोत्साहन, रोग निवारण र उपचारका साथ-साथै फेरी तन्दुरुस्ती प्रदान गर्ने अपार सम्भावना हुन्छ ।
वास्तवमा जे जति रोग छन्, ति सबैको कारण र उपचार करिब एउटै हो । शरीरमा जब विकार पदार्थ सञ्चय हुन थाल्छ, त्यही स्थितीलाई हामी रोग भन्छौं । अतः ति विकार निर्मूल गर्नु नै उपचार पद्दती हो । उपचारको विद्यमान विधी अनेक छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा प्राचिन, विश्वसनिय र प्रभावकारी उपचार पद्धती हो, प्राकृतिक चिकित्सा ।
प्राकृतिक चिकित्साले कुनै एक विषेश रोगको मात्र उपचार खोज्दैन, सम्पूर्ण शरीरलाई तन्दुरुस्त राख्छ । रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता विकास गर्छ । शरीरमा कुनैपनि रोगको संभावनालाई न्युनिकरण गर्छ ।
प्रकृतिको उपचारमा दबिएर बसेका रोगहरूलाई माथि ल्याइन्छ र स्थायी रूपले हटाइन्छ । यसले दीर्घरोगबाट पनि मुक्त दिलाउँछ । यसको खास विशेषता भनेको के भने, कुनै शारीरिक समस्या वा रोग मात्र होइन, मानसिक र सामाजिक उपचार पनि गर्छ ।
प्राकृतिक चिकित्साको एउटा सूत्र छ, केवल भोजन नै चिकित्सा हो । हामीले खाने भोजनले नै शरीरलाई निरोगी वा रोगमुक्त बनाउने हो । हामीले खाने भोजनले नै शरीरको प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने हो । शरीरलाई बलियो, तन्दुरुस्त बनाउने हो । दीर्घायु बनाउने हो ।
जबकी आज त्यही खानपानको कारण मान्छे रोगी हुँदैछन् । जिर्ण हुँदैछन् । मृत्युको मुखमा पुगिरहेका छन् । खानालाई खान जानियो भने औषधी हुन्छ । खाना खान जानिएन भने विष हुन्छ ।
शरीर पञ्चतत्वले निर्माण भएको छ । प्रकृति पनि पञ्चतत्वले निर्माण भएको छ । प्रकृति र शरीर आपसमा एकाकार छन् । त्यसैले शरीरलाई रोगमुक्त राख्ने बुटी पनि प्रकृतिमै छ । पञ्चतत्व भनेको अग्नी, आकास, जल, वायु र पृथ्वी ।
जल चिकित्सा -जल चिकित्सा पानी को उपयोग बाट गरिने एक विधि हो । पानी को आˆनै गुणहरु हुन्छन्, जसले रोग निमुएल बनाउने भूमिका खेल्छ । पानी बाट गरिने उपचार पद्धतीमा, हिप वाथ, सौना बथ, स्टिम वाथ, स्पिनल बथ आथि पर्छ ।
मोटरसाइकलको सिटमुनि गाँजा
लन टेनिसको उपाधि ऋतिक र सलोनीलाई
विदेशीको निगरानी गर्न ७७ वटै जिल्लामा समिति प्रस्ताव
एक सातामै दोस्रो पटक आर्मी मछिन्द्रसँग पराजित
कक्रोचको आँखामा बले : उहाँले जोडी भेट्नुभो, म सिंगल !
वर्ष खेलाडीलाई ग्लोबल आईएमईको पुरस्कार प्रायोजन
ललितपुर हत्या प्रकरण : पहिले लडेर घाइते, त्यसपछि कुटपिट !
Army Day observed today
प्रदेशलाई खुला मदिरामुक्त बनाइन्छ : मुख्यमन्त्री राउत
भिसा नभएको विदेशीलाई नेपाल ल्याए वायुसेवा कम्पनी कारबाहीमा पर्ने
Person dies in Pokhara scooter accident
जन्ती पुर्‍याएर फर्केको बसमा मरिच र छोकडाको तस्करी
रियल मड्रिड अनौठो क्लब हो : रहिम स्टर्लिङ
Boy killed in road accident in Dolakha
यसरी गर्छ सेनाले ठूला भवनमा आगलागीमा फसेका मान्छेका उद्दार
लिभरपुलका प्रशिक्षक क्लोपलाई म्यानचेष्टरका १० वर्षीय फ्यानको पत्र
बास्कोटालाई राजीनामाकै भरमा उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै नेविसंघको प्रदर्शन
एमसीसीबारे नेकपा कार्यदलको प्रतिवेदन तयार, आजै अध्यक्षद्वयलाई बुझाइने
ललिता निवास प्रकरण : मृतकलाई अदालतमा उपस्थित हुन १५ दिने म्याद !
इन्डोनेसियामा हुने टेनिस प्रतियोगितामा नेपालका ६ खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्ने
Virus cases balloon in SKorea as outbreak shifts, spreads
कोरोनाले गौतमबुद्ध विमानस्थल निर्माण नै प्रभावित
सेना दिवसमा नाचगान र हेलिकप्टर प्रदर्शनी (फोटो फिचर)
‘आमा’ हेर्न ह्विलचियरमा ८३ बर्षिया आमा हलमा…(भिडियो सहित)
Foreign Minister Gyawali to leave for Geneva today
वुहानबाट उद्दार गरिएकाहरु चढेको बसमा आक्रमण
जुम्लामा हिमपात, जनजीवन प्रभावित
भारतमा बन्धक दुई नेपाली चेलीको उद्धार
सुरेनको ‘धन कमाउने’ सार्वजनिक
White House win title
प्रकाश र वर्षाको ‘परदेशी २’को शुभसाइत
Three Star defeat Satasidham
Weather to remain gloomy with rainfall in some region
Police outplay Bharatpur
Oasis beat Baluwatar
क्रिकेट रंगशाला बनाउन दिएको जग्गाको शोधभर्ना फागुनभित्रै
Boxers picked up for Thai Open
चर्चबाट फैलियो दक्षिण कोरियामा कोभिड-१९, २५ लाख मानिसलाई घरभित्रै बस्न आग्रह
After league success, Katuwal eyes national team job
त्रिभुवन विमानस्थलको उडान अवतरण अस्तव्यस्त
छाप्रोमा बस्दै आएका ७५ वर्षीय वृद्धलाई रेडक्रसको सहयोग
युरोपा लिगमा आर्सनल विजयी, युनाइटेड बराबरीमा रोकियो
डोरी टाँगेर पैसा मागिरहेका बालकको बसको ठक्करबाट मृत्यु
यी हुन् नेपाली सेनाले सार्वजनिक गरेका शक्तिशाली हतियार
चाखलाग्दो कुरा : किन बनाइन्थ्यो गढ र किल्लाहरु ?
Missing child found floating in pond in Siraha
गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशाला परिसरमा वडास्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता
कालीगण्डकी ए जलविद्युत केन्द्र मर्मतका लागि ड्याम खोलियो
अधुरा आयोजना यो वर्ष पनि अधुरै !
Japan extends support for disaster resilience
३५ वर्षसम्म एउटै विद्यालयमा पढाएका शिक्षकको बिदाइमा गाउँभरी रुवाबासी
आराध्यदेव शिवको ज्ञान : परिवर्तनको लागि आवश्यक छ ध्यान
फूलैफूलले सजिएको पशपुतिनाथ
गुल्मीमा सेना दिवसको अवसरमा मैत्रीपूर्ण फुटबल
सेना दिवसमा जे देखियो (तस्बिरहरू)
वाणिज्य बैंकहरूको संकलन रकम ३० खर्ब ६२ अर्ब, आधा मुद्दती खातामा
विपन्न नागरिकलाई टाउको तथा स्पाइनलका शल्यक्रिया सामाग्री निःशुल्क
प्रचण्ड भन्छन्, ‘सत्तामा पुगेपछि कम्युनिष्टले आफैँलाई सिध्याउँछन्’
Thirteen cases of police torture reported in 2019
भरतपुर बसपार्कमा विधुतीय चार्जिङ स्टेसन बन्ने
‘म हराएको होइन, मेरा लागि समय नै गलत थियो’
बेहुलीझैं सिंगारियो पशुपति, दर्शनार्थीको भीड(फोटो फिचर)